बिदा तथा औषधी उपचार सम्बन्धी बिबरण राख्ने फाराम: (म.ले.प , फाराम ) न. ४२ – Public Health Concern(PHC)
बिदा तथा औषधी उपचार सम्बन्धी बिबरण राख्ने फाराम: (म.ले.प , फाराम ) न. ४२
in Forms Format (फारामहरु ), डाउनलोड, सरकारी सेवाका लागी
बिदा रेकर्ड फाराम
निजामती कर्मचारीले आफु सेवामा छदा, आफ्नो बिदा तथा औषधो-पचार सम्बन्धी बिबरण राख्ने फाराम महालेखा परिक्षण फाराम न (म.ले.प , फाराम ) न. ४२ /यस अन्तर्गत कर्मचारीहरुको बिरामी, घर,प्रसूति, अध्ययन, असधारण आदि बिदाको खर्च र बाकी को रेकर्ड राख्ने गरिन्छ /
मलेप फा.न . -४२
Tags: bida record formform formatsNIjamati Karmacharipublic health documentsऔषधि उपचार रेकर्ड फाराममलेप फा.न ४२
लोक सेवा ले माग्यो १०००० कर्मचारीको आबेदन ! स्वास्थ्य तथा कृषि तर्फ शून्य !(बिस्तृत जानाकारी समेटिएको )
बजेटमा स्वास्थ्य: सामुदायिक विद्यालयमा सेनेटरी प्याड निःशुल्क !